Critic » တကျော့ပြန် ဗကသ သို့မဟုတ် တိုက်ပွဲခေါ်သံ ABFSU	14
တောင်ပေါ်သား says: သြော် သြော် ဒါမျိုးလည်း ရေးတတ်သကိုး ၊
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖွတ်အစိုးရက ဘယ့်နှယ်ညစ်မယ်မသိသေးဘူး …
surmi says: ကြောင်မြူနစ်နဲ့ ချောင်တူးဇော် ကတလေသံတည်းပါလား ဟရို့ ကောင်းတယ် ဆက်မြှောက်ပေးးး .……
ဖွတ်နဲ့ နစ်ပျက်တွေနဲ့ မပေးအယူများလုပ်ထားလေသလား ကွယ်တို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ဆြာ့နောက်က.. ဆြာ့…ဆြာတွေချည်း…
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ နယ်က မဘသနဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာက လေသံတွေကြားရသလောက်တော့
မြစပဲရိုး says: မနေ့က ဘီဘီစီ သတင်းထဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
မြစပဲရိုး says: . ငြိမ်နေတာကြာလို့ စိတ်များကောက်သွားလား တွေးနေတာ ပြန်ပေါ်လာလို့ ဝမ်းသာလှပါတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို လက်ခံ ဆိုတော့ ……..
Ma Ma says: Thorn Nay Soe
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြောင်သား လှုပ်ရှားမှု ထပ်ဖြစ်မှာ ကြောက်တဲ့သူ ကြည့်လိုက်ရင် လှုပ်ငမ်းပိုင်ရှင်ဒွေ၊ လခကောင်းနေသူတွေ၊ ခွင်ရိုက်ဖို့ စောင့်နေသူတွေချည်းပဲ…. ။ ဒီတော့ပြောပြီပေါ့ ကူမြူ နစ်တို့ ဘာတို့ ညှာဒို့ အားမနာ လျှာမကျိုး….။ ဘွားဒေါ်ဂျီး နာမည် အသုံးချပြီး သူဌေးတွေကလဲ ချမ်းသာဖို့၊ ပိုချမ်းသာဖို့.. ချမ်းသာသထက် ချမ်းသာဖို့….၊ လခလေး အဟုတ်မှတ်သူကလဲ ကိုယ့်နေရာလေး မပျောက်ဖို့… ဟေ့ အမေစုကို ဝိုင်းရံကြကွ။
Ma Ma says: ဘယ်လူကိုမှ မထိခိုက် မနာကျင်ကြစေချင်ဘူး။
မှတ်ချက်- ကြောင်မပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အူးကြောင်သဘော အူးကြောင်မနော အူးကြောင်စာသဘော ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီအိပ်မက်ဆိုးကြီးတွေ… အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့သာ.. ပြီးသွားပါစေတော့လားကွယ်…